निशुल्क हुनुपर्ने ठाउँमै लिइन्छ फोटोकपी गर्न चालीस रुपैयाँ ! « Etajakhabar
निशुल्क हुनुपर्ने ठाउँमै लिइन्छ फोटोकपी गर्न चालीस रुपैयाँ !
काठमाडौ । निःशुल्करूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने बैंक खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नमूना दस्तखत कार्डको फोटोकपी गर्न रु ४० पर्ने गरेको छ । जिल्लाको मध्यक्षेत्र सर्केगार्ड गाउँपालिकामा स्थापना भएको सिटिजन्स बैंकको शाखामा नमूना दस्तखत कार्ड सकिएको भन्दै फोटोकपी गर्न महङ्गो मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो आएको हो ।